Caaseffama Mootummaa Ceehumsaa Biyyoolessa Naannoo Oromiyaa (MCBNO) – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooCaaseffama Mootummaa Ceehumsaa Biyyoolessa Naannoo Oromiyaa (MCBNO)
National Transitional Government Of Oromia (NTGO)
MCBNO kun caffee cehumsaa (transitional council) miseensota jaarmiyaalee ABO fi KFO akkasumas waldaalee sivilii, waldaalee amantii, Abbootii Gadaa, jarmyaa dargaggootaa, Jarmyaa dubartootaa irraa kan ijaaramu ta’ee baay’ina miseensotaa caffee 337 qabaata. Caffeen cehumsaa kun Pirezidantii fi Itti aantoota sadi (3) of keessaa filatamaniin hogganama.
MCBNO hanga mootummaan ummataan filatame bakka bu’uutti kan ummata bulchu yoo ta’u, yeroon hojii isaa waggaa sadi kan hincaalle ta’a.
Caffeen Cehumsaa MCBNO af-yaa’ii fi Itti aanaa af-yaa’ii ni qabaata akkasumas koreewwaan barbaachisaa ta’an ni hundeessa. Af-yaa’iin walgahii Caffee Cehumsaa ni gaggeessa; ni hooggana.
MCBNO Naannoodhaan, Godinaan, Aanaadhaanii fi Gandaan kan caaseffamedha. Haa ta’u malee, Caffeen MCBNO barbaachisaa ta’uusaa yemmuu itti amanu sadarkaa bulchiinsaa kan biroo caasessuu ni danda’a.
Qaamni MCBNO seera tumu Caffee Cehumsaa Oromiyaati. Caffichis qaama aangoo ol’aanaa Mootummaa Cehumsaa Naannichaa ta’a.
Qaamni seera raawwachiistuun ol’aanaa Mootummaa Cehumsaa Naannichaa Waajjira Pirezidantii Bulchiinsa Mootummaa Cehumsaa Naannichaa yoo ta’uu, itti waamamnisaa Caffee Cehumsaa Biyyooleessaa Oromiyaatiif ta’a.
Pirezidantiin yeroo cehumsaa hoogganaa ol’aanaa qaama hojii raawwachiiftuu mootummaa cehumsaa biyyooleessaa naannichaa ta’ee ni hooggana; bakka ni bu’a, itti aantoota pirezedantii, itti gaafatamtoota dameewwani, biiroolee fi waajjiroota adda addaa sadarkaa naannoo fi bulchiinsa godinaa irratti muudamaaf paartoota adda addaa fi oggeeyyii keessaa kaadhimaman Caffee Mootummaa Cehumsaatiif dhiheessuun ni raggaasisa, qajeelfama adda addaa baasee qaama raawwachiiftuuf ni kenna.
Yeroo cehumsaa kana keessatti caasaaleen mootummaa taajajila idilee ummataa kennuuf armaan dura diriiran itti gafatamtummaan tajajila isaanii kennuu itti fufu; Projeektoonni misoomaa adda addaa Naannicha keessatti jalqabaman martuu gufuu malee akka xumuraman haalli ni mijaataaf.
MCBNO jaarmiyaalee addunyaa adda addaa kanneen akka Mootummaalee Gamtoomanii (UN), Gamtaa Afriikaa, Dippiloomaatonni biyyoota adda addaa, Tokkummaa Awurooppaa (EU), Dhaabbilee Miti-motummaa fi Dhaabbileen mirga dhala namaatiif falmatan akkasumas jaarmiyaalee biroo dantaa Oromiyaa waliin qaban hunda wajjin waltii dhiheenyaan ni hojjata.
MCBNO bulchinsa mootummaa naannolee kanneen biroo wajjin ta’uun Itoophiyaa keessatti walta’insi cehumsaa hunda hammataa fi shira of-keessaa hinqabne ta’u isaa ragaa walabaa akka ta’aniif qaamootii godinaa kannen akka Gamtaa Afriikaa, Gamtaa Awurooppaa, jaarmiyalee mirga dhala namaa idila addunyaa kannen akka Amnesty International, Human Rights Watch, namoota dhunfaa bebbeekamoo, hayyota maqaan baay’ee farfamanii fi nam-tokkee ykn gartuun kamuudhufanii akka tajjaban gochuu fi hundeeffamu isaa keessatti qooda irraa eegamu hunda ni gumacha.
MCBNO dhaabbilee adda addaa (waloo,dhuunfaan, namtokkee) fi miidiyaalee Magaalaa Finfinnee keessa jiraatan dabalatee kanneen bakka adda addaatti argaman wajjin sirna diimokiratawaa ta’e bu’uureessuuf, bulchinsa gaarii dagaagsuu fi misooma saffisaa fiduuf waltti dhiheenyaan ni hojjata.